Wednesday May 23, 2018 - 16:43:51 in Wararka by Super Admin
Maamulka isku magacaabay Puntland ayaa soo saaraya amarro isdaba joog ah oo ka dhan ah shacabka ku dhaqan deegaannada dhaca Waqooyi Bari dalka Soomaaliya.
Colaadda u dhaxaysa maamullada dabadhilifyada ah ee Somaliland iyo Puntland ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay shacabka Rayidka ah ee lagu dhax dagaallamayo.
Amar cusub oo kasoo baxay maamulka Puntland ayaa lagu mamnuucay in badeecado ganacsi loo daabulo magaalooyin ay kamid yihiin Hargeysa,Burco iyo Laascaanood oo uu ka arrimiyo maamulka uu madaxda ka yahay Axmed Siilaanyo.
Maamulka Garoowe wuxuu sheegay in dil toogasho ah lagu fulin doono cid walba oo lagu helo iyadoo la shaqeynaysa maamulka Somaliland haddii ay ahaan laheyd dad shacab ah ama saraakiisha ciidamada.
Wasiirka Amniga Puntland, Axmed Cabdullaahi Yusuf (Dowlad) ayaa warbaahinta akhrinayay 11 qodob ay soo saareen guddiga difaaca Puntland, waxaana kamid ahaa in aan la ogoleyn in badeecado loo daabulo deegaannada uu ka arrimiyo maamulka Somaliland islamarkaana ladilo doono cid walba oo wada shaqeyn lasameysa maamulkaasi.
Sidoo kale wuxuu Guddig difaaca 'Puntland' dambi qaran ku tilmaamay cid kasta kasoo horjeeda tallaabada uu maamulka Garoowe uu dib ugu qabsanayo dhulka ka maqan waana tallaab kale oo ciriiri lagu gelinayo shacabka ku dhaqan gobollada waqooyi Bari dalka Soomaaliya.